Ikhaya le-Calpine uMjikelo woNyaka kwi-Sierra Valley! - I-Airbnb
Ikhaya le-Calpine uMjikelo woNyaka kwi-Sierra Valley!
Ikhaya lethu lisembindini weSierra Valley entle kwidolophu encinane yaseCalpine. Kufuphi neSierra Hot Springs kunye nolonwabo olungapheliyo lweentaba. Ukukhwela iintaka, ukukhwela ibhayisekile, ukutyibilika, ukukhwela intaba, 4X4ing nokunye okuninzi.
Ukuhlala apha kuya kuwuvuselela ngokupheleleyo umphefumlo wakho. Intle kwaye iyimfihlo, kodwa ikufutshane kuyo yonke into onokuyifuna.
Igumbi elinye elinebhedi ekhululekileyo kunye negumbi lokuhlambela labucala. Ikhitshi eligcweleyo lokulungiselela ukutya okanye umgama wokuntywila kwiindawo ezininzi zokutyela.
Indlu yethu izolile kwaye ikhululekile.
Ukuhlala kwakho kunokuphumla kwaye kuphumle ngokupheleleyo okanye unokwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye kuchulumancise njengoko ufuna. Unokunyuka, ukuloba, ukukhwela iintaba, ibhayisekile, ukuqubha, i-kayak, igalufa, isikhephe, ukutya, okanye ufumane i-manicure kunye ne-massage, yonke into ngaphakathi kweemayile ezimbalwa kweli khaya. IReno, iTahoe, kunye neTruckee zingaphakathi kweyure yokuqhuba. I-Whitehawk Ranch, iGraeagle, iLake Davis, iClio, iSierra City, iDownieville kunye neLakes Basin entle nganye ikumgama weemayile ezimbalwa ezibukekayo.
Zintlanu iikhosi zegalufa ezili-18 ezinesiqingatha seyure yonke yokuqhuba kunye neendawo zokutyela ezininzi ezibalaseleyo. Indawo yoLonwabo yeLakes Basin ekufutshane inobuninzi bamachibi acwengileyo, kwaye iSierra Buttes engentla enendawo edumileyo yomlilo ibonelela ngawo onke amanqanaba okunyuka intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukuloba, ukukhwela isikhephe kunye neminye imisebenzi yasehlotyeni nasebusika.
ISierra Valley yindawo ethandwa kakhulu yizilwanyana zasekhaya. Isilo-qabane sakho samkelekile kwikhaya lethu, kodwa nceda uqaphele ukuba kuya kubakho intlawulo yesilwanyana ngasinye se-$25. nganye. Emva kokubhukisha kunye nokwamkelwa, ugcino luya kuguqulwa kwaye intlawulo yongezwe. Nceda ugcine zonke izilwanyana zasekhaya kwifenitshala nakwiibhedi. Indawo yokulahla inkunkuma iya kubakho kwinkunkuma yezilwanyana zasekhaya ekuya kufuneka icocwe phambi kokuba ihambe.
4.69 · Izimvo eziyi-97
Indlu ihleli kwindlela ezolileyo kwaye ihleli ngasemva ukusuka kuhola wendlela 89. Ubulula bokuba sedolophini kunye nobumfihlo beendlela ezingasemva. Indawo yokupaka eyaneleyo yeemoto ezimbini, iinqwelo ezirhuqwayo kunye/okanye isikhephe.
Ngalo lonke ixesha ngefowuni okanye ngetekisi :) Inkonzo inebala kakhulu, ngoko nceda usebenzise ifowuni yendlu ukuba kukho imfuneko. Inani lethu liya kunikwa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Calpine